WordPress neWPO: maitiro ekuvandudza kumhanya kweecommerce yako | ECommerce nhau
ECommerce nhau | | CMS uye Technology, SEO
Chimwe chezvinhu zvinosarudzika mune chinzvimbo cheSEO ndiyo kurodha kumhanya kwewebhusaiti. Paunenge uchishanda neWordPress, matekiniki eWPO ndiwo makuru sosi yekukwirisa chikamu ichi.
Naizvozvo, zvakakosha kuti uzive uye utore hanya neichi chinhu kubva pakutanga kwekuvandudzwa kwayo. Muchikamu chino isu ticha tsanangura maitiro ekuzviita uye chii zvakanakira hukama uhwu pakati peWordPress neWPO.
1 Kurumidza kuzivisa kune WordPress
2 Chii chinonzi WPO
3 WPO uye WordPress
3.1 Maitiro ekushandisa yakanaka WPO muWordPress
Kurumidza kuzivisa kune WordPress
Mazhinji mawebhusaiti ayo akagadzirwa izvozvi akagadzirwa neWordPress, inozivikanwawo nechidimbu chayo WP. Iyi yemukati manejimendi sisitimu kana CMS inokutendera iwe kukudziridza mhando dzese dzemasaiti, kubva pane yakapfava showcase kune yakaoma ecommerce, neimwe nzira inokurumidza, yakapusa, inoshanduka-shanduka uye ine mari.
Kuti uite izvi, inoshandisa akagadziridzwa matemplate ayo anogona kuve akagadziriswa, nepo plugins kana microprograms yekubatanidza mamwe mabasa mukuziva kwayo.
Pakutanga, matemplate anoshandiswa ane maficha anodiwa kuti ashandiswe nemazvo: iwo wiriranaIvo vane chaiwo ekuchengetedza mazinga, vane hushamwari kune ekutsvaga injini uye vanokutendera iwe kuti nekukurumidza ubatanidze ine simba uye static zvemukati.
Yayo yekumhanyisa kumhanyisa iri zvakare yakarurama, asi mune chero mamiriro ezvinhu inogona kuvandudzwa, uye yakawanda, nekubatanidza izvo zvinonzi zvinonzi WPOs. Tichaongorora chinhu ichi chakakosha mukumhanya kwekuwana mawebhusaiti akanakisa pazasi.
Chii chinonzi WPO
Aya mazwi anowirirana anoenderana neshoko kuChirungu Webhu Performance Kugadziridza kana, akati muchiSpanish, webhusaiti kuita optimizations. Basa rayo rakajeka: kuwedzera mashandiro eiyo saiti kuitira kuti igone kutakura munguva ipfupi inogoneka.
Icho ichokwadi chakaratidza, uye isu hatifanire kuchiregeredza, Vashandisi veInternet havamirire anopfuura matatu kana mana masekondi kuti vawane webhusaiti kana ecommerce. Nguva iyoyo isati yapfuura, ivo vanotsvaga imwe nzira yekuenda uye vanosiya kuyedza kwekutanga. Mune mamwe mazwi, kushomeka kwekukwirisa kumhanya zvisingaite kunotungamira mukurasikirwa kusinga gadzirisike kwevanogona kuve vatengi kana vateveri.
Zvakare, hazvina kukwana kungoisa izvo musha nekukurumidza: iyo yese saiti inofanirwa kuvhurika zvinonzwisisika, pasina kukosha kana kwenguva refu kumirira uye kuona inonakidza mushandisi ruzivo kune yega yega mushandisi weInternet.
Chimwe chiitiko chinotarisa ndechekuti Google inoona iyi nyaya sechinhu chakakosha munzvimbo yayo yechisikigo. Iyo yakareba iyo peji redu inotora kurodha, mukana mudiki wainayo wekunyatso kuiswa mumainjini ekutsvaga.
WPO uye WordPress
Panguva ino, isu tese takatanga kuve nekuwedzera kuziva nezve iyo kukosha kweWPO painenge ichigadzira ecommerce. Basa rekusika muWordPress harisi izvo: ehe kana hongu, zvakakosha kuti ukwidziridze kuita kwewebhu panguva ino.
Iko kiyi inongotungamirwa nezvikwata kana nyanzvi mukusimudzira uye / kana padanho rewebhu. Kushandisa nyanzvi idzi zvakakosha kuti uwedzere kuoneka, traffic, shanduko uye kudzoka kwemawebhusaiti edu. Chaizvoizvo, kugadzira ecommerce neWordPress kuri mukati mekusvika kweanenge munhu wese, hazvitombove zvakakodzera kuti uve neruzivo rwemberi rwekugadzira webhu. Asi zvakadaro, pane musiyano mukuru pakati pekutsikisa webhusaiti yakanaka uye kuva neecommerce inokunda mumisika inokwikwidza.
Ndozvazviri chaizvo nezvazvo. Kuti unakidzwe nechishandiso Marketing inoshanda, inoshanda uye inokwanisa kuswedera padyo nezvinangwa zvedu zvine hungwaru.
Maitiro ekushandisa yakanaka WPO muWordPress
Chokwadi, basa rekugadzirisa mashandiro eecommerce yakaitwa muWordPress rakanyanya kuomarara pane kusanganisa nhevedzano ye plugins kutsunga. Ivo rubatsiro chairwo, asi rwunodiwa vane ruzivo rwakakwana uye ruzivo kukwanisa kusarura kuti ndedzipi idzo dzakakodzera, dzisanganise, dzipukute uye gadzirisa zvinodiwa mune izvi.
Naizvozvo, nenzira isingadzivisiki, tinofanira kuvimba nazvo freelancers nyanzvi mukumisikidzwa kwewebhu, avo vanokwanisa uye vanokwanisa kuita nemazvo basa iri.
Segwara, kuratidza padanho rekuoma uye nhamba hombe yesarudzo dzehunyanzvi dzinofanirwa kuitwa mune izvi, tinonyora pazasi ndezvipi zviwanikwa zvinobvumidza kukwidzirisa mwero wekutakura wechero WP ecommerce:
Simbisa mifananidzo inosanganisirwa: Huremu hwekupedzisira hwewebhu ndiwo mhedzisiro yezvakawanda zvidiki zvinowedzerwa uye, zveizvi, mifananidzo inopa mupiro wakakura. Kuona paInternet hakudi mifananidzo yesarudzo yakasarudzika uye huremu hwakakura. Nekudaro, isu tinowanzo dhizaina nemafomati aya, ari echokwadi emhando yepamusoro. Nekuvabatanidza muWordPress redu, isu tiri kuwedzera zvisina kufanira uremu hwese saiti, kuremara chaiko kunodzora kumhanya kwayo kurodha.
Tevedzera kusimbiswa kweyemukati kurodha: LazyLoad inzira inobvumidza iwe kuti udzose kutaridzika uye kurodha zvimwe zvemukati kusvika panguva chaiyo yavari kuzoonekwa nemushandisi. Kana ivo vari kunze kwenzvimbo inooneka, kana pavanotanga kufamba, havana kutakurwa. Izvi zvinoderedza zvakanyanya nguva yekuratidzira yega yega skrini. Mushandisi anozviona zvakanyanya.
Wedzera cache: Kune izvi pane zvakasiyana plugins dzinofarira kumhanya kwenzvimbo uye nekuvandudza kweWPO. Maitiro aya anosanganisira ehunyanzvi zvinhu senge kuayina iyo HTML, kugonesa kunzwisisa, kuchengetedza bandwidth uye kuendesa, nezvimwe. Iyo freelancers Nyanzvi dzinonyatsoziva zvatinoreva.
Minifesa static zviwanikwa: Ndiwo mumwe mubvunzo unonzwika senge Chinese kune neophytes. Inoshanda kuCSS, JS kana kunyange mafaera eHTML uye inoita kuti vatore nzvimbo shoma uye nekudaro vanotora nguva shoma kurodha.
Bheja pamitoro ine zvirevo zvemaraibhurari uye zvimwe zviwanikwa: Zvinosanganisira kurodha chete izvo zvinhu zvinozoshandiswa muchikamu chimwe nechimwe, izvo zvinodzivirira kurodha pasi dzese dzisati dzadiwa.
Chibvumirano hosting mhando: Musiyano wemutengo hauwanzo kuenda pamusoro pe4 kana 5 euros uye, mukudzoka, ivo vanosanganisira tekinoroji yepamusoro uye yepamberi, inozotibatsira pachinangwa ichi.
Tinogona kuenderera mberi tichitaura nezvekuchengeta dhatabhesi redu rakachena uye riri mumamiriro akakwana, tichigadzirisa kodhi yacho, tichishandisa CDN nezvimwe zvinoratidza zvakafanana.
Asi hazvidiwe: sarudzo yakanakisa ndeyekuhaya nyanzvi inokwanisa iyo inokwanisa kutora mukana wakazara wekumhanyisa kumhanya kwewebhu webhusaiti. Nenzira iyi ichave inokwikwidza, yekutengesa uye inobatsira. Hatifanire kukanganwa kuti chishandiso che Marketing yakakosha mumazano mazhinji ekumaka.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » CMS uye Technology » WordPress neWPO: maitiro ekuvandudza kumhanya kweecommerce yako